I-11 yeeTshaja zeMoto ze-USB ezizezona zithengwayo ngo-2021 - Ibhlog
Ukwabelana Ngesondo Nokuthandana
I-11 eyona tshaja yeMoto ye-USB ngo-2021
Iintlobo zeetshaja zeemoto ze-USB
I-11 yeeTjaja zeMoto ze-USB eziBalaseleyo
Ungayikhetha njani Itshaja yemoto ye-USB eLungileyo
Xa unohambo olude nolujikayo ngaphambili, ufuna ukuqiniseka ukuba ulungisiwe ngayo yonke into. I-snacks yendlela, uluhlu lokudlala olumangalisayo, kwaye ewe, eyona tshaja yemoto ye-USB ingcono yokusebenzisa izixhobo zakho ekuhambeni. Esi sixhobo sincinci siza kunye nezibuko zokutshaja ezininzi ezinokudibanisa neentlobo ezahlukeneyo zezixhobo ngaxeshanye. Ikwaza nezinto zokhuseleko ezakhelwe ngaphakathi eziqinisekisa ukuba ii-smartphones zakho kunye neetafile ziyatshaja ngaphandle komngcipheko.
zitshisa ixesha elingakanani izibane zeti
Ukuba imoto yakho ayizanga netshaja, ezi zinokuba luncedo kwaye zibambele eziluncedo ekulula ukuzisebenzisa kwaye ziyahambelana ne-USB ephumayo kwiimoto ezininzi. Apha, sinoluhlu lwezona tshaja zemoto ze-USB ezikumgangatho ophezulu eziya kuba liqabane lakho rhoqo endleleni. Ngaphambi kokuba singene nzulu kuloo nto, makhe sijonge iintlobo ezahlukeneyo zeetshaja zeemoto ze-USB.
Iitshaja zeemoto ze-USB ezinengcingo zizitshaja zemoto ezinesidibanisi socingo esingasusekiyo kwaye zidla ngokusetyenziselwa isixhobo esithile okanye esinye. Ezi ndidi zeetshaja ibiziitshaja zemoto ezisele ziphulukene nokuthandwa kwazo. Nangona kunjalo, olu hlobo oludala lwetshaja yemoto luthembekile kwaye luhlala ixesha elide kuba lubonelela ngesantya esicothayo sokutshaja. Ngelishwa, ezi ntlobo zeetshaja zeemoto zineenkqubo zokukhusela ezisisiseko.
Iitshaja zemoto ezingasebenzisi ntambo ziinguqulelo zale mihla zeetshaja ezinocingo. Ezi zitshaja ezibandakanya isitena samandla kunye nentambo ye-USB ekhutshwayo. Kutshanje, baye bafumana ukuthandwa kakhulu ngenxa yokukwazi kwabo ukutshaja iifowuni ngeezibuko ezahlukeneyo ze-USB. I-Versatility yenye yezona zinto zibalaseleyo kwitshaja ye-USB engenacingo.
Iitshaja zeemoto ezininzi ze-USB
Ezi ziitshaja zemoto ze-USB ezingafakwanga ntambo kwaye ziza nezibuko le-USB elingaphezulu kwe-1. Ivumela umntu ukuba ahlawule izixhobo ezininzi ngaxeshanye. Uninzi lwezi tshaja zisebenzisa i-smart-charging technology ukulawula ivol'https://www.amazon.com/dp/B07PGT7LSR/?' target=_blank rel='sponsored noopener' class=amz_price_check> Ixabiso kwiAmazon Ixabiso kwiWalmart
Nye. Anker Dual Mini USB Mini 24 W Itshaja yemoto
Le tshaja yemoto ye-USB ka-Anker ihambisa i-24 W yezantya zokutshaja ngokukhawuleza ngelixa isendleleni. Iqokobhe layo langaphandle leprimiyamu liyilwe kwialloyi ye-aluminiyam kwaye libonisa uyilo olumelana nokukrweleka. Ngaphakathi kweli qokobhe lomelele kukudityaniswa kweesekethe ezityatyekwe ngegolide ukunciphisa ubushushu kunye nokugcina izantya zokutshajisa ezizezona ntsuku zininzi. Le tshaja yemoto etshaja ngokukhawuleza inento yokhuseleko oluninzi ukugcina wena kunye nesixhobo sakho ukhuselekile. Itshaja ifanelekile kuzo zombini izixhobo ze-Apple kunye ne-Android kwaye iyafumaneka kwiifowuni ezixhaswayo kwaye iyafumaneka emnyama, ebomvu, nesilivere.
Amazibuko amabini e-USB-A
Kulula ukuyiplaga kwaye uyikhuphe
Ayihambelani neQualcomm yokubiza ngokukhawuleza
Mbini. TIKALONG Itshaja yemoto ye-USB emibini
Itshaja yemoto ye-TIKALONG yenzelwe ngobuchule ukuba ilingane kakuhle kuyo nayiphi na imoto. I-premium aluminium alloy casing yenza ukuba imelane nemikrwelo kunye noncedo ekuchitheni ubushushu. Izixhobo zibonakalisa ukhuseleko lwangoku kunye nokuhlawulelwa ngaphezulu ngelixa zikwagcina ulawulo lobushushu ngelixa utshaja ii-smartphones kunye neetafile. Iibhandle kunye netshaja yemoto zimbini izibuko ze-USB ezizinyawo ezi-3 ezibonisa undoqo wobhedu we-22 AWG obonelela ngesantya sokutshaja esikhawulezayo esiyi-15% kunezinye iintambo ezininzi ze-USB.
Amazibuko amabini e-USB
Isenokungasebenzi kakuhle ngee-iPhones ezindala.
3. I-Adapter yemoto ekhawulezayo ye-USB ESAyiniweyo
Chaza ezinye zeempikiswano ezihlala zenzeka phakathi kwabazali nolutsha.
Ingqondo yesi sixhobo esakhiwe yi-BLUETEK TECKNET ilele ekuphunyezweni kwe-chip ye-Qualcomm ebonelela ngeteknoloji ye-QC 3.0 yokuhlawula. Enye yezona zinto zibalaseleyo zale tshaja kubuchule bayo bokutshaja. Oku kuvumela itshaja ukuba isebenzise ukutshaja okunamandla okuguquguqukayo ngesantya esifanelekileyo sokutshaja ngokukhumbula ubushushu bebhetri kunye nemeko. Isekhethi ekrelekrele ephucukileyo ibonelela ngokhuseleko kwiisekethe ezimfutshane, ngaphezulu-yangoku, ukutshaja ngokugqithisileyo, kunye nokutshisa.
Ingenza ingxolo ecofayo xa iphantsi komthwalo onzima
Isine. Bralon USB Rapid Itshaja yemoto
Le yenye yezona tshaja zincinci zeemoto ze-USB kuluhlu lwethu lwezona tshaja ezili-11 zemoto ze-USB. Ibonisa inkqubo yokutshaja ehlakaniphile ebonelela ngokutshaja okusebenzayo ngelixa usendleleni. Ixhasa ukutshaja okukhawulezayo kwaye inokuhlawula izixhobo ezininzi ngaxeshanye. Eyakhelwe kwitshaja ziinkqubo ezininzi zokhuseleko ezikhusela kwi-over-current, over-vol'https://www.amazon.com/Anker-Charger-PowerIQ-PowerDrive-Delivery/dp/B07RL2N8YY/?' target=_blank rel='i-noopener exhasiweyo'>CHOETECH 2-Port Fast Charger
Uyilo oluthambileyo kunye nolukhaphukhaphu lwale CHOETECH i-adapter yemoto yenza kube yinto ethandwayo kwiimoto ezinendawo encinci. Iza nazo zombini izibuko le-USB Type-C ecaleni kwe-USB Type-A eqhelekileyo. Ngaphantsi kwe-hood kukho i-chip ye-IC ehlakaniphile elawula isantya sokutshaja kwaye ikhusela ekushiseni, ngokugqithisileyo, kunye nokutshaja. Iyahambelana kwihlabathi liphela kunye nazo zonke izixhobo kwaye iya kusebenza kakuhle ekutshateni ii-smartphones kunye neetafile ngokufanayo.
Izibuko ze-USB ezimbini
I-Qualcomm iTyala eKhawulezayo 3.0
Isalathisi sokukhanya kwe-LED
Umzimba wetshaja unokutshisa kancinci kancinci xa isetyenziswa ngokuqhubekayo.
6. WOTOBEUS USB Mini Adapter
Iivesi zebhayibhile malunga nokuswelekelwa ngumzali
Uninzi lodumo lwayo luvela kwizantya zokutshaja ezikhawulezayo ezidityaniswa neetekhnoloji ezimbini zokutshaja ezikrelekrele. Eyakhelwe kule tshaja yemoto edibeneyo yi-PD 3.0 PPS etshaja ngokukhawuleza i-chip kunye ne-QC 3.0 yokutshaja ngokukhawuleza kwe-chip. I-2 Type-C USB port ine-65 W kunye ne-30 W yokukala, ngelixa i-port ye-QC inomlinganiselo we-18 W. Ubuchule obukhulu beli tshaja bukwazi ukukhawuleza ukuhlawula ii-iPhones kunye nee-smartphones ze-Android kunye namacwecwe.
Inkxaso yokutshaja kwiLaptop
Izinto zePC ezingatshiyo
Ingadinga igalelo eliqhubekayo levol'https://www.amazon.com/Charger-AINOPE-Cigarette-Compatible-Included/dp/B088CXWSTB?&linkCode=sl1&' target=_blank rel='sponsored noopener'>AINOPE USB Isiadaptha seMoto
Ngokukwazi ukuhambisa i-54 W yamandla adibeneyo, le adaptha yamandla eyomeleleyo yi-AINOPE inokuhlawula ii-smartphones, iitafile, iincwadana, kunye neelaptops. Ngobuchwephesha boNikezelo lwaMandla, le tshaja iyakwazi ukutshaja amaxesha ama-3 ngokukhawuleza kwaye ithatha iiyure ezi-2 kuphela ukuhlawula ngokupheleleyo iMacBook Pro. Idityaniswe netshaja yintambo ehlala iC ukuya ku-C enobude obuziimitha ezi-3.3. Intambo enayiloni ephothiweyo iphumelele iimvavanyo zokugoba ezingaphezu kwama-20,000 kwaye iyakwazi ukumelana novavanyo lwexesha.
Over-current and over-vol'https://www.amazon.com/Charger-Adapter-Compatible-Tablets-Devices/dp/B08JTWPLC4?&linkCode=sl1&' target=_blank rel='sponsored noopener'>TOLLEFE Ukutshaja ngokukhawuleza Iadaptha yeeMoto
Enye yezona zinto zibalaseleyo kule tshaja yemoto ye-USB kukuphunyezwa kwenkqubo yokutshaja yee-multi-port. Itshaja iqukethe iinxalenye ezi-2; eyona yunithi iphambili 3 USB izibuko kunye neyunithi yokuqhagamshela kunye 2 izibuko USB. Iyunithi yokudibanisa idityaniswe kusetyenziswa intambo yokutshaja yeenyawo ezi-5 kwaye ivumela abakhweli bezihlalo zangasemva ukuba bahlawule izixhobo zabo. Ifakwe ngaphakathi kwitshaja sisikhuselo se-chip esizibhaqa ngokuzenzekelayo izixhobo zakho kwaye zilawule okwangoku ngokusebenzayo. Isalathisi se-LED esisebenzisekayo sikugcina unolwazi xa umthombo wamandla uqhagamshelwe kwitshaja.
iiklasi zokulawula umsindo kwi-Intanethi ngesatifikethi
Abanye abasebenzisi baxele ukuba ayinikezeli ukutshaja ngokukhawuleza
9. TECHKEY Itshaja yemoto ye-USB ekhawulezayo
Umphandle owenziwe kakuhle we-alloy we-TECHKEY wetshaja yemoto awunyangeki kwaye uvumela ukuchithwa okungcono kobushushu. Le tshaja inetekhnoloji yokutshaja kabini ukuxhasa amaqonga ahlukeneyo okutshaja afana nokuNikezelwa koMbane 3.0 kunye nokuTshaja ngokukhawuleza kwe-3.0. Ngenxa yoyilo lwayo kunye nomgangatho wokwakha obalaseleyo, isebenza ngakumbi kunetshaja zemveli. I-Type-A kunye ne-C ye-USB yezibuko kwintlawulo ivumela izixhobo ezinamazibuko ahlukeneyo amandla ukuba ahlawule ngaxeshanye ngaphandle kokuphazamiseka.
I-2-port intlawulo ekhawulezayo
Inkqubo yokhuseleko lwamandla
Abanye abasebenzisi besixhobo se-Android baxele isantya esiphakathi sokutshaja
10. Itshaja yemoto ye-Lchrla ye-USB
Itshaja yemoto ye-Lchrla ye-USB ibonelela ngokuhambelana okubanzi kunye neziphumo ezi-2 zezibuko le-USB. I-adaptha yokutshaja imoto inenkxaso eyakhelwe-ngaphakathi yokudibanisa i-Type-C, izixhobo ze-USB ezincinci, kunye nezixhobo ze-Apple. Isalathisi se-LED esibekwe ngokufanelekileyo sisongezo esisebenzisekayo. Umphandle wenziwa ngezinto ezingatshiyo ukuze kuqinisekiswe amava okutshaja akhuselekileyo. Ukuba ujonge ukuthenga itshaja yemoto enenkxaso yokutshaja kwizixhobo ezininzi, ungajongi ngaphaya kwe-adaptha yemoto yeLchrla.
Intambo eyakhelwe-ngaphakathi engena-tangle
Inokubonelela ngesantya esicothayo sokutshaja xa izixhobo ezi-2 ziqhagamshelwe.
Shumi elinanye. I-Adapter yokuTjaja yeMoto ye-GiQ
Ngelixa itshaja yemoto yeGiQ inokubonakala ngathi nayiphi na enye itshaja yemoto, akunjalo. Idityaniswe kunye neetekhnoloji zokutshaja ezi-2; ukuNikezelwa koMbane kunye nentlawulo eKhawulezayo yeQualcomm. Ngomthamo omkhulu we-52.5 W, itshaja iyakwazi ukutshaja ii-smartphones ezingama-60% ngokukhawuleza kuneadaptha zemveli. Umzimba wenziwe nge-alloy ye-aluminiyam ye-ABS enganyangekiyo kwaye yomelezwe yinkqubo yesekethe efakwe ngegolide ekhusela i-overcurrent kunye neesekethe ezimfutshane. Isalathisi samandla e-LED esikhanyayo xa siqhagamshelwe kumthombo wamandla.
Ukuzabalaza kwiplagi yasimahla
Inokutshisa kakhulu xa iphantsi komthwalo ogqithisileyo
Ngoku ukhe wajonga ezinye zezona tshaja zemoto ze-USB ezinokuthi zithengwe ngemali, kuya kufuneka uyazi ukuba kufuneka ujonge ntoni xa uthenga iadaptha yemoto ye-USB. Nalu uluhlu lwezona ngqalelo zibalulekileyo ekufuneka uzikhumbule.
Okukhona uphezulu umndilili wetshaja yemoto ye-USB, kokukhona isixhobo siya kutshaja ngokukhawuleza. Kuba ingezizo zonke ii-smartphones ezifunayo okanye ezinokuxhasa i-amperage ephezulu, kubalulekile ukuba ujonge incwadi ye-smartphone yakho ukuqinisekisa esona santya siphezulu sokutshaja esixhaswayo ngaphambi kokuba uthenge itshaja yemoto. Isincomo esihle siya kuba yitshaja yemoto ene-4.8 amps.
Iitshaja zeemoto ze-USB ziza namanani ahlukeneyo amazibuko. Abanye banoyilo lwezibuko olunye ngelixa abanye befikelela kwizibuko ezi-5 ze-USB. Nangona kunjalo, oku kuya kumiselwa kusetyenziso lwakho kunye nenani lezixhobo. Ukuba unezixhobo ezi-2 okanye ezi-3 ezifuna ukutshaja ngaxeshanye, bubulumko ukuthenga itshaja yemoto ye-USB enezibuko ezi-3 ubuncinane. Khumbula ukujonga iinkcukacha zamazibuko e-USB njengoko zinokwahluka ngokuxhomekeke ekusebenzisaneni.
Le yenye yezona ngqwalasela zibalulekileyo ngelixa ukhetha itshaja yemoto. Kufuneka uqinisekise ukuba itshaja iyahambelana nemoto yakho kunye nesixhobo sakho. Ngelixa iitshaja zihlala ziza neetekhnoloji ezahlukeneyo zokutshaja, ii-smartphones kunye neetafile azifiki. Yiyo loo nto kubalulekile ukujonga ukuba isixhobo sakho siyakuxhasa ukutshaja okukhoyo kwitshaja yemoto.
Ziziphi iingenelo zetshaja yemoto ye-USB?
Itshaja yemoto ye-USB ifana nayo nayiphi na enye itshaja kodwa inenzuzo enye enkulu. Inokuhlawula isixhobo ngelixa isendleleni. Uninzi lweetshaja zeemoto ze-USB zibonelela ngokuhambelana jikelele, ezivumela abasebenzisi ukuba bahlawule izixhobo ezininzi. Kutshanje, abavelisi baqalisile ukubandakanya ngaphezulu kwe-1 USB port kwitshaja. Oku kuvumela izixhobo ezininzi ukuba zihlawuliswe ngaxeshanye.
Ingaba iitshaja zeemoto ze-USB azinamanzi?
Ngelishwa, zimbalwa kuphela iiadaptha zeemoto ze-USB ezikwaziyo ukumelana namanzi. Uninzi lweetshaja zeemoto ze-USB azikwazi ukuchaphaza kwaye zinokuphatha amathontsi amanzi ambalwa kwiqokobhe langaphandle. Nangona kunjalo, nantoni na engaphezulu koko kwaye itshaja ye-USB ibotshelelwe ukuba ingasebenzi kakuhle kwaye ibone ukufa okungalindelekanga.
Ngaba ndingabiza izixhobo zam xa injini yemoto yam icimile?
Impendulo yalo mbuzo ayikho lula njengoko ivakala. Oku kungenxa yokuba kuxhomekeke ngokupheleleyo ekwenzeni imoto. Ezinye iimoto zicwangciselwe ukuba zivale amazibuko alula umdiza kamsinya nje emva kokuba injini icinyiwe, ngoxa ezinye zisenokuba nesibali-xesha esisishiya sivuliwe kangangexesha elifutshane.
Iitshaja zeemoto zinokusindisa ubomi obukhulu. Nokuba usendleleni eya kwisikhululo seenqwelomoya, intlanganiso ebalulekileyo, okanye kwisiganeko sosapho, itshaja yemoto inokusihlawulisa ngokukhawuleza isixhobo sakho sombane ngelixa usohambeni. Baye baduma ngenxa yefomu yabo encinci, uyilo kunye nokusetyenziswa. Uninzi lweetshaja zeemoto, ukuba ziphathwa kakuhle, zingahlala iminyaka embalwa. Nangona kunjalo, njengazo zonke izixhobo ze-elektroniki, iitshaja zemoto nazo zinokungaphumeleli ngequbuliso. Ngombulelo, kuba uninzi luneempawu zokhuseleko olwakhiweyo, izixhobo zakho kwaye ugcinwe ukhuselekile. Ngaphambi kokuba wenze oko kuthenga kubaluleke kakhulu, phinda undwendwele uluhlu lwethu lwezona tshaja ezili-11 zemoto ze-USB kwaye ukhethe eyona uyithanda kakhulu.
Malunga Movie Iscreenare Slideshows Ulutsha Luthando Ukutya Plans And Programs Ukuthandana Imiboniso Yesilayidi
ezilungileyo kunye neempawu ezintle zelibra
uncamisa njani umfana
Ungapheka ixesha elingakanani nge-2 lbs yenyama yenyama
ungajongana njani nosapho olukuthiyileyo
kungakanani ukufumana inja neutered
indlela yokufumana umbala omthubi ezinweleni zam